Madaxda Soomaaliya iyo Jabuuti oo kulan ku yeeshay Villa Somalia – Somali Top News
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta Muqdisho soo gaaray ayaa wadahadallo labo geesood ah ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya.
Madaxweyne Geelle oo hoggaaminayo wafdi ballaaran ayaa booqasho rasmi oo labo maalmood ah ay uga bilaabatay dalka, waxaana mudadaasi labada casho ay yeelan doonaan kulamo kala duwan, iyagoona si wadajir ah u wada furi doona maalinta berito ah safaaradda cusub ee Jabuuti ka dhisatay magaalada Muqdisho.
Dhismaha safaaraddan cusub ayay madaxweyne Geelle iyo madaxweyne Farmaajo bishii February ee sanadkii 2017 si wadajir ah u dhagax dhigeen, waxaana ay ku taallaa degmada C/casiis, gaar ahaan dhanka xero Mariino ee dhowaan maamulka gobolka Banaadir u qoondeeyay eeriyo diblomaasiyadeed.
Waxaa sidoo kale lagu wadaa in madaxweyne Gelle uu booqdo magaalada Baladweyne oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dalka Jabuuti kuwaas oo qeyb ka ah kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Midowga Afrika.
← Ciidan katirsan kuwa maamulka Puntland oo mushaar la’aan darted uga baxay Saldhig Military
Dad shacab ah oo u dhameeyay sarkaal katirsan Al shabaab →
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka arinsaday furitaanka kalafadhigooda 4aad
Ra’isul Wasaare Kheyre oo Golohiisa Wasiiradda amar dul dhigay